Warshad gariiradda steel galvanized | Shiinaha galvanized steel gariiradda-saareyaasha, shirkado cusub
farta anti-farta GL galvalume biraha for go'yaal saqafka
55% AL-ZN dahaarka birta birta waa substrate bir ah oo lagu dahaadhay labada dhinac oo leh aluminium-zinc daawaha leh halabuurka dahaadhka, 55% aluminium, 43.4% zinc iyo 1.6% silikoon. Caabbinta wanaagsan ee daxalka ee 'Aluzinc' waa natiijada ka timaadda astaamaha labada walxood ee macdanta birta ah: saameynta ka hortagga aluminium ee ka jirta dusha sare ee dahaadhka iyo ilaalinta allabariga ee zinc.
qabow giringiriyey bir gariiradda qabow duubay bir adag adag adag
QAADO QALABKA XARUNTA birta waxaa lagu soo saaraa iyadoo lagu duudduubayo gariiradda kulul oo si isku mid ah loogu rogo heerkul ku habboon dhumuc khafiif ah. Waxay leedahay qaabeyn dusha sare leh iyo aalado farsamo oo heer sare ah oo loogu talagalay in lagu isticmaalo gawaarida iyo soosaarida qalabka elektarooniga ah.
midab dahaarka GI GL PPGI PPGI gariiradda steel galvanized galvanized for sheet saqafka
CCL (Line Coating Line) qalabka khadka oo dhan iyo teknolojiyaddiisa waxaa laga keenay Japan Nippon, dhammaan arameters-ku waxay la kulmayaan ENRO-STANDARD. waxay qaadataa daaha saddexda-rullaluistemadka, laba daahan laba qalajiyo, ballaca ugu badan ee ballaadhkiisu waa 1450mm. shuruudaha-dhamaadka sare ee kala duwan ayaa lagu gaari karaa. Midabbada iyo tilmaamaha kale ayaa lagu heli karaa macaamiisha markay codsadaan.
zinc kululeeyay kulul gariiradda steel galvanized
Kul-kululeeyo GALVANIZED I-dogob waxaa sidoo kale loo yaqaanaa galvanized kulul-maquufta I dogob ama alwaaxa kulul kulul zinc waa la dhex galay ka dib markii miridhku steelh-500 digrii Celsius dhalaalaa ee zinc, dogobyada ku lifaaqan lakabka zinc ee dusha sare, si ay ugu adeegaan ujeedooyin ka hortag ah, ku habboon dhammaan noocyada acid iyo ceeryaamo alkali ah iyo deegaanno kale oo daxal ah